राजा वीरेन्द्रको दरबार सर्वसाधारणका लागि खुल्ला - Purbeli News
राजा वीरेन्द्रको दरबार सर्वसाधारणका लागि खुल्ला
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ०६, २०७७ समय: १६:३९:०२
काठमाडौं / स्व. राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गरेको निवास श्री सदन सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएकाे छ । शनिबार एक कार्यक्रमका बीच पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले श्री सदन प्रदर्शनमा ल्याइएको घोषणा गरेका हुन् । दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि श्री सदनमा ताला लागेको थियो ।
भट्टराईका अनुसार अब जनताले नारायणहिटी दरबार, श्रीपेचसँगै राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारले प्रयोग गरेको निवास अवलोकन गर्न पाउनेछन् । श्री सदनमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू छन् । नारायणहिटी संग्रहालयबाट महेन्द्र मञ्जिल हुँदै श्री सदन पुगिन् । नेपालको राजसंस्थासँग जोडिएका अन्य ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तु यहाँ छन् ।
श्री सदनभित्र छिर्दा तत्कालीन राजपरिवारको जीवनशैली बुझ्न सकिन्छ । सदनको निर्माण २०२३ सालमा भएको हो। उमेर पुगेका युवराज र राजा एउटै घरमा बस्नु हुन्न भन्ने राजपरम्पराअनुसार वीरेन्द्रका लागि श्री सदन बनेको थियो। स्व. मोतीरत्न स्थापितको नेतृत्वमा श्री सदन निर्माण भएको हो।
नेपाली शैलीको यो भवनमा टायल, काठ, सिमेन्ट, देवीदेवताका मूर्ति कुँदिएका ढोकाहरू छन् । सात रोपनी पाँच आना जग्गामध्ये ७ आना दुई पैसा क्षेत्रफलमा यो भवन ठडिएको छ ।